Dziviriro Yekudzivirira Magirazi njanji & Fenzi Factory | China Kuchengetedza Girazi Railings & Fenzi Vagadziri, Suppliers
Kuchengetedza Girazi Railings / Girazi Pool Fence
Basic info Chengetedza iwo maonero kubva kune yako dziva uye dziva rakajeka uye risina kukanganiswa neGirazi Railing system. Yakazara yegirazi yepane njanji / dziva fenzi kune yakatsamwa magirazi mabhuru, mukati kana kunze, kuisa girazi dhiza railing system ndiyo yechokwadi-moto nzira yekuwana kutarisisa uye kuunza yako dhiza railing / dziva fenzi fenzi mazano kune hupenyu. Zvimiro 1) Yakakwira Aesthetic Yekukwirira Girazi njanji inopa kutaridzika kwekutarisa uye kurira chero humwe dhiza railing system inoshandiswa nhasi. Kune vanhu vazhinji, iyo girazi dhiza dhiza maoko ari ...
Basic Info Yongyu Girazi, mutengesi weUS Ice Rink Association, akaendesa SGCC inobvumidza 1/2 uye 5/8 ”yakatsvaira girazi zvigadzirwa kuiyo ice rink indasitiri muUSA kubva muna2009. Isu tinotengesa yepamusoro-mhando uye zvine mutengo unonzwisisika yakatsamwa zvigadzirwa zvegirazi kune vatengi vedu uye nekugovana purofiti kubva kutengeserana. Zvimwe zvinobatsira Iyo yakatsamwa ice rink girazi system inoshanda zvakashata kuchengetedza vateereri kumashure kwayo. Akatsamwa ice rink girazi masisitimu anoshanda zvinangwa zvinoverengeka, zvinosanganisira: 1) Kuchengetedza ...
Basic info Kuchengetedza girazi rekuparadzanisa madziro kunoitwa neyakagadziriswa girazi / lamoni girazi / IGU pani, kazhinji ukobvu hwegirazi hunogona kuita 8mm, 10mm, 12mm, 15mm. Kune dzimwe mhando dzakawanda dzegirazi dzinowanzo shandiswa sepahara, yekugadziridzwa yegirazi, girazi siriki yekudhinda yakadhirowewa girazi partition, gradient girazi kupatsanura, laminated girazi kupatsanura, insured girazi kupatsanurwa. Girazi kupatsanura rinonyanya kushandiswa muhofisi, imba uye zvekutengeserana kuvaka.10mm yakajeka yakagunzva girazi kupatsanurwa is 5 times stro ...
Basic Info Kuderedza njodzi nekutsamwa uye lamoned kuchengetedzwa girazi Rokuchengetedza girazi kubva kuYongyu Girazi rinouya nechunk yezvimwe zvinhu zvekudzivirira iwe kubva mukutyisidzira kana imwe mishap iitika. Zvigadzirwa zvedu zvinosimbiswa kubva mukati kuti zviwedzere kusasimba uye kudzivirira kubva pamatanda kana zvaparara netsaona. Iine yakakwirira-inoshanda glazing zvinhu, yedu kuchengetedza rakamiririrwa girazi rakaoma kutsemuka uye inokwanisa kumira muhoro iyo yakajairika sarudzo dzinokundikana. Mune ichi chigadzirwa ...